पत्याउनुहुन्छ ? जनकपुरमा यसरी आइपुग्यो ब्लास्ट लिएर रेल – Pahilo Page
पत्याउनुहुन्छ ? जनकपुरमा यसरी आइपुग्यो ब्लास्ट लिएर रेल
५ कार्तिक २०७५, सोमबार २१:४५ 3315 पटक हेरिएको
काठमाडौं, ५ कार्तिक । भारतको झारखण्डबाट ब्लास्ट लिएर दोस्रोपटक जनकपुरमा रेल आइपुगेको छ । रेल्वे लिकमा प्रयोग हुने गिट्टी (ब्लाष्ट)सहितको रेल आइतबार जनकपुर आइपुगेको हो ।
रेल तथा मेट्रो विकास आयोजना साइट कार्यालय जनकपुरका प्रमुख इञ्जिनियर विनोदकुमार ओझाले तयारी अवस्थामा रहेको लिकभित्र राख्न प्रयोग हुने ब्लास्ट भारतको पाखौर झारखण्डबाट मालवाहक रेलमा ल्याइएको हो । प्रतिघण्टा १० किलोमिटरको गतिमा आएको मालवाहक रेलको ¥याकमा लोड गरिएको ब्लास्ट मजदुरले लिकमा झार्दै आएका हुन् ।
भारत सरकारको सहयोगमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको लिकबाट दोस्रो पटक ५३ ¥याकसहितको रेल जनकपुर आइपुगेको हो । धनुषाको कुर्थासम्म रेल्वे सञ्चालनका लागि तीन हल्ट र पाँच स्टेशनको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
स्टेशन भवन र आवास निर्माणको कार्य पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यात्रुवाहक रेल गुडाउन भारतको जयनगर बर्दिवास ब्रोडगेज (६९ किलोमिटर) सञ्चालनका लागि काम भइरहँदा जयनगर–जनकपुर रेल लिकलाई आज मालवाहक रेल गुडाएर ‘फाइनल टच’का लागि तयारी शुरु गरिएको प्राविधिकहरुले बताएका छन् ।
भारतीय निर्माण कम्पनी इरकोन इन्टरनेशनलले ब्रोडगेज रेल सञ्चालनका लागि लिक बनाएको हो । यसअघि जयनगर–जनकपुर–बिजुलपुरा (५२ किलोमिटर)मा सञ्चालित न्यारोगेज रेलमा २० देखि २५ किलोमिटर प्रतिघण्टाको गति थियो । ब्रोडगेज रेल सञ्चालनमा आएपछि जयनगरदेखि कुर्थासम्मको ३५ किमी दूरी आधा घण्टामा पूरा हुनेछ ।